Padmaavat oo ganacsi taariikhi ah suuqyada caalamka ka sameenayo kaliya Gulf-ka ayuu ku liitaa – Filimside.net
Padmaavat oo ganacsi taariikhi ah suuqyada caalamka ka sameenayo kaliya Gulf-ka ayuu ku liitaa
Deepika Padukone, Shahid Kapoor iyo Ranveer Singh filimkooda Padmaavat ayaa ganacsi taariikhi ah suuqyada caalamka ka sameenayo wuxuuna noqday filimka lacagaha ugu badan daafaha caalamka kasoo xareeyo oo aysan sedexda Khans hogaamiye ka ahayn.
Padmaavat waxaa lala yaaban yahay inuu USA/Canada ilaa haatan kasoo xareeyay $9.25 million wuxuuna noqon doonaa filimka Hindiga ah ee lacagaha ugu badan halkaas kasoo xareeyo asigoo Dangal $12.39M halkaas xareeyay dhaafi doono.
Padmaavat ku liitaa suuqa Gulf-ka oo uu kaliya kasoo xareeyay $3.5 million waana lacag gaabis ah weliba 50% ayuu ganacsi ahaan suuqaan kaga hooseeyaa filimka Tiger Zinda Hai oo $7.15 million ka keenay Gulf-ka.
Padmaavat sida guud ganacsiga TZH suuqyada caalamka mar hore ayuu dhaafay weliba waxaa lala yaabay in Padmaavat 50% ganacsi ahaan USA/Canada kaliya uu dheeraaday filimka TZH ganacsiga uu halkaas ka sameeyay.
Padmaavat waxaa la rajeynaa $24M ilaa $26M ganacsi u dhaxeeyo inuu suuqyada caalamka kasoo xareeyo waana lacag waali ah madaama filimkaan sedexda Khan mid ka mid ah uusan hogaamiye ka ahayn.
Waxaa Aqrisay 398